Wax walba oo ku saabsan Dihydroboldenone
1.Waa maxay Dihydroboldenone / DHB? 2. Dihydroboldenone / DHB qiyaasta
3.Dihydroboldenone / wareega DHB 4.Dihydroboldenone / DHB natiijooyinka
5.Dihydroboldenone / Dhibaatooyinka DHB 6.Dihydroboldenone / DHB nolosha nuska
7.Dihydroboldenone / DHB marka la jarayo 8.Dihydroboldenone / DHB loogu talagalay bulking
9.Dihydroboldenone / faa'idooyinka DHB 10.Dihydroboldenone / DHB dib u eegis
11.Dihydroboldenone / DHB iibka 12.Dihydroboldenone / 1-Testosterone for bodybuilding
1. Waa maxay Dihydroboldenone / DHB?
Dihydroboldenone (65-06-5) inta badan loo yaqaan sida DHB waa steroid xooggan oo bixiya natiijooyinka tayada gaar ahaan kuwa jidh-dhiseyaasha, orodka, iyo baaskiilaha. Dad badan ayaa isku dhejiya DHB iyagoo leh Methyl 1-test iyada oo ay ugu wacan tahay magaca magaceeda 1-testosterone. Si kastaba ha ahaatee, labada daroogadu way ka duwan yihiin, waxayna labaduba keenaan natiijooyin kala duwan iyo saameynaha kale. Daawada waxaa loo yaqaanaa inay ka mid tahay steroids ugu xoog badan oo bixiya natiijooyin tayo leh dhammaan dadka isticmaala. Dihydroboldenone waa 5-alpha hoos u dhigtay Boldenone taas oo ah sababta magaceeda. Waxkasta oo aad ubaahan tahay inaad ka ogaato Anavar (Oxandrolone) jir dhiska
Marka la barbardhigo testosterone, DHB waa laba jeer oo ka badan anabolic and lessrogenic. Si kastaba ha noqotee, saameynta xooggan ee daroogada ma ahan mid si fudud loo xukumi karo sababtoo ah ciyaartooy badan ayaa doorbidaya isticmaalka Primobolan. Dihydroboldenone waxaa loo yaqaanaa kor u kaca murqaha, waxay sii adkeyneysaa oo kor u qaadaysaa awoodda jirka guud ahaaneed. Xoogga weyn ee awooda ba'an ee DHB wuxuu u saameeyaa steroid si loo gaarsiiyo saameyn la isku halayn karo oo waxtar leh waxyeellooyin yar. Daroogadu waxay si fiican ugu shaqaysaa maamulka SHGB iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan.
Marka si sax ah loo qaato steroid wuxuu kobciyaa wax soo saarka muruqyada jirka iyo sidoo kale inay ku adkeeyaan oo ay adkeeyaan. Dhismaha jirka, waxaad u maleyneysaa inaad la socoto shaqooyinka saxda ah si aad u gaarto natiijooyinka ugu badan. DTH waa hormoon dabiici ah oo ka dhaca jirkaada ka dib beddelka tijaabada. Sida qaar ka mid ah steroids oo hal mar ah nidaamka jidhka u beddesho DTH iyo DHB, testosterone wuxuu u beddelaa estrogen iyo DTH. Iyada oo ku xiran heerka isticmaalkaaga, dhakhtarku waa inuu ku hagaa adiga oo go'aamiya qiyaasta saxda ah. Si aad u noqoto mid amaan ah, baaritaan caafimaad waa in la sameeyaa ka hor iyo ka dib dhammaystirka wareegga koowaad. Jidhka bini'aadamka ayaa si kala duwan u falceliya mukhadaraadka si loo isticmaalo daawooyinka steroid, sidaas awgeed waa in la ilaaliyaa daaweynta caafimaad oo muhiim u ah natiijooyinka wanaagsan.
Dihydroboldenone (65-06-5), sida steroids kale ayaa door muhiim ah ka qaatay caawinta cayaaraha si ay u gaaraan ujeedooyinkooda iyaga oo siinaya korriin iyo kobcitaan murqo oo tayo leh. Daroogadu waxay leedahay saameyn yar oo hooseeya taas oo ka dhigaysa mid ku habboon jismiiyeyaasha xirfadleyda badan. Dihydroboldenone macnaheedu waa anabolic aad u macneheedu wuxuu awood u leeyahay inay siiso muusikada cufan ee cufnayd. Daroogadu ma kordhinayso sii-daynta biyaha ee muruqyada waxayna leedahay daroogooyinka aromatizing. In gaaban, haddii aad raadinayso steroid oo kaa caawin doonta inaad kasbato murqaha iyo hagaajinta waxqabadkaada, markaa DHB waa xerada ugu fiican adiga.
Dhibaatada kaliya ee dadka isticmaala Dihydroboldenone ayaa ah, waa xanuunka cirbadeynta ka dib oo aanad u baahnayn inaad isticmaasho alaabta marka loo eego natiijooyinka ay bixiso. Daroogadu waxay bixisaa awood jireed taas oo u saamaxaysa dadka isticmaala inay saacado dheer ka shaqeeyaan oo ay gaaraan natiijooyinka la rabay. Baaskiiladu waxay kaloo helayaan awood ku filan in ay ku shaqeeyaan ayna ku tartamaan tartamada. Isticmaalayaasha qaarkood waxay ka cabanayaan xanuunka ilaa maalmaha 7 ka dib marka la duro. Si kastaba ha ahaatee, dhakhtarkaagu wuxuu kaa caawin karaa inaad xakamayso dhibaatada, laakiin isticmaalka saliidda canabka ah sida sterilizer ayaa sidoo kale caawin karta. Marka laga soo tago, daroogada ayaa ah mid aad u jecel ciyaartoy farsamoyaqaan ah. Dhinaca kale, waa lagama maarmaan in la iibsado steroid laga helo ganacsade qibrad leh oo khibrad leh oo bixiya alaab tayo leh iyo sidoo kale bixinta waqtigeeda.
2. Dihydroboldenone / DHB qiyaasta
Qiyaasta daaweynta DHB-ga ayaa u dhaxaysa 300 ilaa 400mg usbuuc kasta isticmaalka labka ah. Daroogada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa cayaaraha gabdhaha laakiin waxaa ku jira qiyaaso hooseeya. Dumarka haweenka ah, waxaa lagugula talinayaa inaad ku bilowdo qadar aad u hooseeya si looga fogaado waxyeelooyinka kale ee loo yaqaan "virilization". Qiyaasta cayaaraha haweenku waa inay u dhexeeyaan 25 ilaa 100mgs asbuucii. Si kastaba ha noqotee, dheddigga oo leh khibrad eber leh steroids, qiyaasta daawada ayaa hoos u dhigi karta dhakhtarka, ka dibna waa la kordhiyaa kadib markii la dhamaystiro wareegga bilowga. Isla taasi waxay sidoo kale khuseysaa ragga; dadka bilowga ah waa in ay ka fogaadaan qiyaasaha dihydroboldenone sare ahna had iyo jeer la tasho dhakhtar kahor inta kordhinta qaadashada.
The Dihydroboldenone Xilliyada qiyaasta qaadashada waxay kuxirantahay qoyaanka oo ku xiran dhismaha, laakiin taasi ma saameynayso qiyaasta. Xilligan, cypionate waa caanaha ugu caamsan ee loo isticmaalo soo saarida daawadan. Qiyaasta labka ah ee labka ah waxay wali ka jirtaa 200mgs ilaa 400mgs asbuucii kasta iyada oo aan loo eegin qaylada. Dhaqtarkaaga ayaa markaa kugula talin doona inaad hubiso in aad haysatid heerarka loo baahan yahay ee natiijooyinka wanaagsan. Marka la qaato afka, daroogada ayaa si joogta ah loo qaadaa si ka duwan kan loo mudo. Dihydroboldenone aad ayuu u daciifiyaa qaabkeeda afka ah waxayna leedahay nolol aad u yar.
Dhinaca kale, qiyaasta afka ayaa ah mid aan loo baahneyn bioavailable sababtoo ah maaha methylated iyo kaas oo ka caawinaya ilaalinta ka soo jabiyo by beerka. Markaad dooranaysid foomka dihydroboldenone ee la isku duro, kaliya 100-200mgs todobaadkii ayaa ku filan natiijooyin fiican. Xasuusnow, in qiyaasta daawada loo qaato ay tahay in ay maamulaan xirfadle caafimaad ama haddii aad xirfad u leedahay markaa waxaad isku duri kartaa naftaada. Ha halis gelin haddii aadan hubin si looga fogaado dhibaatooyinka kale.
Marmarka qaarkood, dhakhtarku waxaa lagu qasbi karaa inuu kordho ama yareeyo qiyaasta daaweynta ka dib marka la baaro xaaladdaada caafimaad. Ciyaartoyda badan waxay sameeyaan qalad si toos ah u iibsashada daroogada suuqa iyagoo adeegsanaya iyada oo aan ku lug laheyn dhakhtar caafimaad. Maydka bini'aadanku way ka duwan yihiin oo kaliya sababtoo ah badeecada ayaa u shaqaynaysa saaxiibkaaga macnaheedu maahan inay kugu habboon tahay. Dadka qaarkood waxay ubaahnaan doonaan qadar sare oo bilawga ah halka kuwa kale ee aadka u hooseeya ay noqon doonaan kuwo kaamil ah. Had iyo jeer ka qaybgal dhakhtarkaaga, tababaraha, iyo nafaqada si aad u hesho natiijooyin wanaagsan. Mararka qaarkood qiyaasta ay soo saartay soo-saaraha ayaa laga yaabaa inay ku guuldareystaan ​​inay ku shaqeeyaan ama kuu keenaan waxyeelo daran.
3. Dihydroboldenone / wareega DHB
Caadi ahaan, dadka isticmaala badanaa waxay bilaabaan wareegtooyinkooda iyagoo qaadanaya qiyaasta ka hor inta aanay ku dhicin 400-500mgs ee usbuuca iyo baaritaanka dheer ee ester testosterone. Waxaa lagugula talinayaa in lagu daro xayawaanka aromatase ee wareegga DHB si loo dheellitiro estrogen ee testosterone. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa taageerada dheeraadka ah sida N2Guard. La tasho dhakhtarkaaga wixii macluumaad dheeri ah iyo sidoo kale inaad sameysid wareegga ugu wanaagsan ee baahidaada ama natiijooyinka la rabo. Qaababka qaarkood waxay ka dheeraan karaan kuwa kale, iyadoo ku xiran heerka isticmaalka cayaaraha. Isticmaalayaasha saboolka ah waxay inta badan leeyihiin wareega Dihydroboldenone oo ka badan kuwa bilowga ah. Ciriirinta wareegyada wareegyada iyo wareegga xajmiga ayaa sidoo kale ka duwan waana la xakameynayaa xeryahooda kala duwan. Haddii ay dhacdo inaad buuxiso wareegga oo aad ku guuldareysato inaad hesho natiijooyinka la rabay ama aad la kulanto saameyno liddi ku ah, u sheeg dhakhtarkaaga.
4. Dihydroboldenone / DHB natiijooyinka
The DHB natiijooyinka in aad hesho waxay ku xiran tahay sida aad u isticmaasho daroogada iyo sida aad ula socotid waxyaabaha kale ee muhiimka ah sida tababarka iyo cuntada. Kuwa isticmaala si fiican waxay ku raaxeystaan ​​natiijooyin wanaagsan oo ay ku gaaraan saameyntooda la rabo. Dihydroboldenone looma tixgeliyo mid ka mid ah steroids ee ugu sarreeya, laakiin waxay keenaysaa natiijooyin tayo badan oo loogu talagalay dadka isticmaala. Daawada ayaa loo yaqaan in ay isticmaalaan dadka isticmaala si ay u yeeshaan murqaha xoogan oo adag. Hadafka jir-dhiseyaashu waa inuu kobciyo murqaha laftirka leh ee u oggolaanaya inay si tartiib tartiib ah u tartamaan. Dihydroboldenone waa steroid ah oo damaanad qaadaya muruqyada tayada isticmaala muddada ugu gaaban ee suurtogalka ah. Qaadashada qiyaasta taageerada dheeraadka ah waxay noqon doontaa fikrad aad u fiican oo lagu gaaro natiijooyinka la rabay.
Daawada sidoo kale waxay kordhisaa awoodda jirka guud oo u sahlaysa cayaaraha in ay ka shaqeeyaan saacado badan oo si fudud u helaan murqaha. Himilada kama dambaysta ah ee cayaaraha kasta waa inuu ku guuleysto xirfaddiisa / kiisa, taasina waa tan wixii dihydroboldenone ah. Inta badan ciyaartoyda isticmaala daroogada ayaa isticmaalay jawaab celin wanaagsan waxaana ku amaanay inay ku guuleystaan ​​koobab kala duwan ka dib markii ay si guul ah u dhameystireen wareegga qiyaasta. Xaalado badan, cayaartoyda ayaa ku guul dareysta inay ku guuleystaan ​​tamar la'aan, laakiin taasi waa dhibaato la xalin doono markii aad dhameysato wareegga DHB. Haddii ay dhacdo inaad ku guul daraysato helitaanka natiijooyinka ka dib wareeggaaga, la xiriir dhakhtarkaaga si aad u hesho caawimaad dheeraad ah. Natiijooyinka kale ee suurtogalka ah waa dhibaatooyinka soo raaca haddii aad xad-dhaaf ah ama aad ka hor tagto tilmaamaha dhakhtarka.
5. Dhibaatooyinka dhinaca Dihydroboldenone / DHB
1-Testosterone (65-06-5) waa steroid aad u fiican oo la bedelay waqti ka waqti si kor loogu qaado waxtarka iyo hoos u dhigo saameynaha. Si kastaba ha noqotee, kakanaanta jirka ee bini'aadamka, dadka isticmaala badan waxay la kulmaan dhibaatooyin kala duwan ka dib marka la isticmaalo steroid. Mararka qaar dadka isticmaala waxay dareemaan saameynta daawada isla markiiba ay billaabaan wareeggooda iyo sidaas darteed, waxaa lagugula talinayaa in aad u sheegto dhakhtarkaaga waqtigaa. Dhakhtarku wuu yareeyn karaa qiyaasta iyo haddii aysan shaqeynin isaga / iyadu waxay joojin kartaa wareegga oo dhan. Xaaladaha qaarkood, dadka isticmaala waxay dareemaan dhibaatooyinka soo raaca ka dib marka ay dhammeeyaan wareegga. Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa caadiga ah dihydroboldenone saameynaha;
Cirbadaha xanuunsan - isticmaalayaasha badani waxay ka cabanayaan xanuunka aagga duritaanka oo mararka qaarkood ku kici karo illaa toddobaad. Dhab ahaan, tani waxay ka mid tahay dhibaatada ugu caansan ee jirdhisleyda badan ee wajahaya marka ay u tagaan steroids oo laysku duro. Si kastaba ha noqotee, waxaad u beddeli kartaa qiyaasta afka, inkastoo ay ka sii xoog badan tahay marka la barbardhigo midka la mudo. Markaad tixgelisid natiijooyinka daawada la isku mudo ee aad ku raaxeysan karto, markaa xanuunku ma aha inuu kaa joojiyo inaad gaarto hadafkaaga.
Timo-luminta: mararka qaarkood marka la dhaafo, steroid waxay saameyn toos ah ku yeelan kartaa koritaanka timahaaga. Si kastaba ha ahaatee, la xiriiridda dhakhtarkaaga waqtigaa ayaa kaa caawin kara xakamaynta dhibaatada. Dhibaatooyinka kale ee kale waxaa ka mid ah, xiniinyaha yaraynta, waxay waxyeelo u geystaan ​​beerka waxayna saamaynayaan wadnahaaga iyo shaqada beerka. Dhibaatooyinkaasi waxay ku badan yihiin kuwa ka badan xadiga steroid ama isticmaala iyada oo aan la baarin baaritaan caafimaad. Mararka qaarkood xaaladaha jirka waxay kordhin karaan darnaanta waxyeelada.
Dumarka, steroid waxay u horseedi kartaa horumarinta sifooyinka ragga sida korniinka iyo kor u qaadista codka dadka kale. Sidaa daraadeed, haweenku waa inay qaadaan steroidka taxadar leh oo ku dheji talooyinka isticmaalka dhakhtarka si natiijooyin fiican. Faa'iido la'aanta ugu weyn ee steroidkani waxa weeye in natiijooyinku aysan aheyn mid deg deg ah, taas oo macnaheedu yahay in maantadan la soo dhaafay laga yaabo inaanay muujin saameynta, laakiin waxaad la kulmi kartaa mustaqbalka. Malaha, taasi waa sababta sababa badan oo isticmaaleyaasha steroid ah ay uga xishoodaan isticmaalka. Haddii aad ku dhegto tilmaamaha isticmaalka markaas waxaad ku jiri doontaa dhinaca ammaanka.
6. Dihydroboldenone / DHB nolosha nuska
DHB badanaa wuxuu ku xiran yahay cytionate cyler taasoo kor u qaadeysa DHB kala badh noloshooda ku saabsan maalmaha 8-10, waana sababta ay daroogada loo duro ka dib maalin kasta 4 ama 6. Dhakhtarkaagu wuxuu qorsheyn doonaa wareegga iyo jadwalka wakhtiyada xaddiga ugu wanaagsan adoo ku xiran calaamadaha ku lifaaqan iyo natiijooyinka la rabo. Ka dib markaad dhammaato wareeggaaga, DHB waxay weli ku jirtaa jirkaaga illaa toddobaadyada 5 ka hor intaanay ka baaba'in nidaamka jirkaaga. Sidoo kale wakhtiga loo qaaday si loo nadiifiyo nidaamka jirka sidoo kale wuxuu ku xiran yahay aabaha kuxiga DHB. Sidaa darteed, haddii aad dooneysid inaad ku tartanto tartanno aan u oggolaaneynin isticmaalka steroids, markaa u sheeg dhakhtarkaaga, inaad bixiso daawada ugu fiican ee la baabi'in doono waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
Qiyaasta daawada DHB-ku waxay leedahay nolol aad u gaaban mana ka xoog badan yahay halista la isku duro. Sidaa daraadeed, qiyaasta afka ah, waxay noqoneysaa, inaad si joogto ah u jeclaato maalin kasta si aad u hesho natiijooyinka la rabay. Si kastaba ha noqotee, kuwa jidh-dila badanaa waxay u tagaan qiyaas daawo loo qaato maxaa yeelay waxay awood u leedahay iyo sidoo kale suurta-galnimada maqnaanshaha qiyaasta waa mid aad u yar. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad isku durto daawada hal mar toddobaadkii. Haddii aadan ku qanacsanayn cirbadaha, waxaad la hadli kartaa dhakhtarkaaga si aad u bixiso qiyaasta afka.
7. Dihydroboldenone / DHB adoo goynaya
Xadidaha wareegista DHB ee jirka dhismaha waxay ka caawisaa in laga saaro dufanka jirka ee aan loo baahneyn ama sii-daynta biyaha ee muruqyada iyadoo ujeedadu tahay in la gaaro murqaha jilicsan iyo kuwa caatada ah. Hadafkaagu waa inaad daadiso inta ugu badan ee aad awooddo oo aad ku gaarto muruqyada caatada ah ama qaabka jirka. DHB waxay ka caawisay cayaartoyda badan ee wareegooda goynta, taasina waa sababta keentay nuucyo caan ah oo ka mid ah ciyaartoyda tartamaya. Marka si habboon u dillaacdo, waxay gubtaa dufanka jirka ee dheeraadka ah waxayna ugu dambeyntii soo saartaa dhammaan muruqyada jirka. Gooyo ayaa sidoo kale ka caawisa in ay awood u siiso jidh-dhisayaasha si ay u gaaraan qaabka jidhka iyo muruqyada adag ee adag. Kala tasho dhakhtarkaaga, si aad u siiso wakhti go'an oo waxtar leh DHB.
8. Dihydroboldenone / DHB loogu talagalay bulking
Halkan waxaad ujoogeeysaa inaad kasbato muruqyo badan iyo miisaan. DHB waxay leedahay waxyaabo aad u fiican oo ka dhigaya kuwa ku habboon ciyaartoyda si aad u dhiiri geliso jirka. Xilliga dihydroboldenone wareegga xajmiga wuxuu ku lugleeyaa qaadashada qiyaasta sare toddobaadkii sida 400 ilaa 500mgs iyo cunto sax ah. Steroid wuxuu leeyahay rikoodh wanaagsan oo lagu caawiyo ciyaartoyda si ay u helaan muruqyo tayo iyo murqo gaaban. Xusuuso inaad daawato cuntadaada oo ka shaqeyso natiijooyin wanaagsan. Ultimate Hagaha Stanozolol (Winstrol) ee Bodybuilding
Inta badan ee ku saabsan DHB boodboodka qiyaasta qiyaasta waxaa lagu go'aamiyaa qashin kuxiga. Dhakhtarkaagu wuxuu ku jiri doonaa booska ugu fiican si loo jadwaliyo qiyaasta saxda ah ee adiga kugu habboon. Iyada oo ku xiran hadhaaga jirka iyo baahida dhakhtarku ka dib ayaa go'aan ka gaari doona taageerooyinka dheeraadka ah ee kaa caawin doona helitaanka natiijooyinka la doonayo. Dumarka, habka isku midka ah ayaa lagu dabaqi doonaa, laakiin qadarku wuu yaraanayaa si looga fogaado horumarinta sifooyinka lab ah.
9. Dihydroboldenone / faa'idooyinka DHB
DHB faa'idooyin badan oo ka mid ah dadka isticmaala gaar ahaan kuwa xirfadleyda xirfadleyda ah. Daroogadu waxay u taagan tahay mid ka mid ah steroids anabolic laakiin xitaa kuma jirto liiska caanaha kale. Waraaqda, daroogada ayaa u muuqata mid xoogan, laakiin kuwa isticmaalay waxay mar walba soo sheegeen natiijooyin wanaagsan. DHB waxay kicisaa koritaanka murqaha waxayna hagaajineysaa awoodda guud ee jidhka. Ciyaartoyda waxay qaataan steroids si ay uga caawiyaan inay dhisaan murqaha xooggan oo ay helaan awood ay ku tartamaan iyo sidoo kale inay si sax ah u shaqeeyaan. Laga soo bilaabo macmiilka dib u eegista meelaha kala duwan, DHB marna ma dhicin. Isticmaalayaasha intooda badan waxay kufaraxaan guushooda xirfaddooda cayaaraha daroogada.
Intaa waxaa dheer, dihydroboldenone ma dhiirigelinayo sii-daynta biyaha ee muruqyada ama aromatize. Sidaa darteed, markaad qaadato daroogada, waxaad xaqiijin doontaa helitaanka muruqyada tayada leh sidoo kale waxay yareysaa dufanka jirka ee xad-dhaafka ah. Wixii isdabamarin, daroogada ayaa si aad ah ugu wanaagsan wax ka qabta waxyaabo kale. Marka la gooyo ama la wareego wareegyada, waxaad xaqiijin kartaa in steroid ay bixin doonto natiijooyinka ugu fiican.
DHB waxa kale oo ay leedahay saameyno yar oo yar marka la barbardhigo steroids kale oo ka dhigaysa mid ku habboon ciyaartoyda iyo xirfadleyda xirfadleyda. Ciyaartoyda dhedigga ah waxay sidoo kale isticmaali karaan steroid laakiin qadar yar; waxay bixisaa saameyn isku mid ah. Ciyaartoyda dumarka ah ayaa u adeegsada daroogada si kor loogu qaado waxqabadka iyo sidoo kale hagaajinta jirkooda. Dumarka waxaa lagula talinayaa in ay aad u taxaddaraan intaad isticmaalayaan daroogada. Khabiiradu waxay ku talinayaan in haweenka uurka leh ay tahay inay tixgeliyaan inay ka fogaadaan steroidkan tan iyo markii ay saameyn karto ilmaha aan dhalan.
Dihydroboldenone wuxuu ku jiraa foomka afka iyo cirbadaha labadaba. Sidaa darteed, siinta fursadaha qiyaasta isticmaalaha. Haddii aanad ku raaxeysaneynin cirbadaha sababtoo ah xanuunka waxaad u doorbidi kartaa qiyaasta afka. Dad badan ayaa ka cabanaya in duritaanka DHB ay xanuunsadaan, xanuunkuna wuxuu mararka qaar ku dhacaa xitaa hal usbuuc, xaalad khafiifisa dadka isticmaala.
Si kastaba ha ahaatee, tani waa in aysan kaa horjoogsanin in aad gaaro hadafyadaada. La socodsii dhakhtarkaaga inuu ku siiyo qiyaasta afka ah inkastoo aad u baahan tahay inaad u qaadato si ka badan inta la isku mudo. Dhinaca kale, badi saameynta dihydroboldenone ee saameynaha waxaa lagu xakameyn karaa adoo raacaya tilmaamaha dhakhtarka. Marka la soo koobo, ma jirto wax laga walwalo marka la isticmaalayo steroid this, ilaa inta aad ku lug leedahay xirfadle caafimaad dhammaan geedi socodka.
10. Dihydroboldenone / DHB dib u eegis
Dihydroboldenone ayaa heleysay jawaab celin kala duwan iyo dib u eegista DHB ee macaamiisha kala duwan. Qaar ka mid ah jir-dhiseyaasha ayaa siiyay qiimeyn aad u fiican halka qaar kalena ay ka cabanayaan in aysan helin natiijooyinka ay rabaan. Si kastaba ha noqotee, inta badan ciyaartoyda ciyaaraha fudud ee isticmaala steroid muddo dheer ayaa dhammaantood faraxsan waxayna u dhigmaan guushooda dihydroboldenone. Raadinta dib u eegis sheyga kala duwan, waxaa cad in dadka isticmaala badan ay ku qanacsan yihiin natiijooyinka daawada ay bixiso. Qaar ka mid ah dadka isticmaala waxay ku faraxsan yihiin inay ku guuleysteen muruqyada tayada leh waxayna kasbadeen awoodda jirka guud ahaaneed. Dhinaca kale, dadka isticmaala qaarkood waxay dareemayaan in daroogadu ay ka kooban tahay alaabooyin heerkulkiisu u eg yahay trenbolone oo ay ka mid yihiin hurdo la'aan marmarka qaarkood iyo dhidid.
Intaa waxaa dheer, cayaartoyda tartamaya ee kala duwan waxay muujiyaan farxadkooda madaama badeecadu aysan waxyeello u keenin rabitaanka cunada, taas oo ka dhigeysa mid si fiican u qalabeynaya wareegyada boodhka. Waxaa jira kuwa soo sheega khibrad khibrad leh daawada daroogada si markaa xanuunka loo duro. Qaar ka mid ah dadka isticmaala dihydroboldenone waxay ku andacoodaan in ay tahay inay nadiifiyaan xanuunada duritaanka ee ku saabsan maalmaha 7. Xanuunnada duritaanka waa caadi waana la xakameyn karaa haddii aad u sheegto dhakhtarkaaga waqtigaa.
Sida hore loo soo sheegay, jimicsi bani'aadamku waxay si gooni ah u fal-celiyaan alaabooyin kala duwan gaar ahaan cirbadaha. Dadka qaarkiis waxay dareemaan in ay kufilan yihiin irbadaha, halka qaar kalena ay dareemaan raaxo la'aan. Dhibaatooyinka dhinaca kale waxaa ka mid ah walaac weyn oo ay soo saareen dad badan oo isticmaala. Waxaa jira kuwa ka cabanaya madax xanuun culus, hurdo la'aan iyo dhidid badan. Dhammaan arrimahaas waa la xallin karaa haddii aad u tagto baaritaan caafimaad inta aanad bilaabin isticmaalka steroid iyo baaritaanno joogto ah intaad socoto wareeggaaga. Sida lafdhabarta kale ee anabolic, dihydroboldenone waa ciriiri. Sidaas daraadeed, waa in la sameeyaa daaweynta wareegga dambe ee daaweynta (PCT), iyo taageerada dheeraadka ah ee loo baahan yahay in lagu daro wareegyada.
11. Dihydroboldenone / DHB iibka
Adoo ah xirfadle xirfad leh, ma khatar gelin kartid shaqadaada adigoo iibsanaya DHB iibka ka iibsashada iibiyeyaasha aan la isku halleynin iyo kuwa aan khibrad laheyn. Habka kaliya ee lagu heli karo alaabta tayada leh waa iyada oo laga soo saarayo soo saaraha iyo khibrad loo yaqaan ama khibrad leh. Waqtigan xaadirka ah, suuqa ayaa daadad la leh suuqyo badan oo iibiya steroid iyo magaciisa laakiin si ay u noqdaan dhinaca ammaanka; waxaad u baahan tahay inaad kala soocdo kuwa dhabta ah ee kuwa been abuura. Qaar ka mid ah alaabooyinka suuqa ayaa laga yaabaa inaysan si fiican ugu fiicnayn jidhkaaga. Waxaan nahay shirkadda ugu fiican ee DHB iyo bixiyaha. Waxaanu u samaynaa dhalashada adduunka oo dhan, waxaadna u baahan tahay oo kaliya inaad u sameyso amarkaaga boggayaga internetka, waxanu u gudbin doonaa waqtiga ugu gaaban ee suurtogalka ah. Waxaan fahamsanahay in qiimaha lacageed uu yahay furaha. Sidaa daraadeed qiimaha macquulkeena ma saameynayo tayada alaabtayada.
At BUYAAS, waad awoodi kartaa Soo iibso DHB in badanaa ama xitaa sameyso amar ku filan wareegaaga waqti kasta oo raaxada gurigaaga. Waxaan leenahay habab lacag bixineed oo lagu dabooli karo dhammaan macaamiisheena suurtogalka ah. Alaabta nala soo iibsashadu waxay ku siinaysaa niyadda nabadda, waxaadna hubsan kartaa inaad helayso natiijooyinka aad rabto. Waxaan mar walba kugula talineynaa dhamaan macaamiisheena in ay sameeyaan cilmi baaris ka hor inta aan la dejin shirkad kasta oo DHB ah. U tag samee shirkad Dihydroboldenone / DHB sida BUYAAS wakhti kasta. Xusuusnow steroids waxay sababi kartaa saameyn xun oo jidhkaaga ah haddii aad qaadato tayad hooseeya ama laga yaabo in aan la iibin kuwa aan xirneyn. Waxaa jira alaabooyin badan oo steroid ah oo been abuur ah, oo haddii aanad taaban, waxaad ku dhici kartaa dabagalkooda maadama ay alaabtu ka jaban yihiin kuwa dhabta ah.
Boggayaga ayaa ah mid user-friendly ah; Sidaa daraadeed waxaad si fudud u gadan kartaa Dihydroboldenone / DHB online adiga oo ka helaya kombuyuutarka, laptop ama smartphone. Waxaan soo saaraa steroids tayada duwan oo ka duwan dihydroboldenone.
Xasuuso inaad sidoo kale kartid iibso budada Dihydroboldenone laga soo bilaabo boggeena. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku dhiirrigelineynaa macaamiisheena in ay fahmaan sharciga dalka oo ku saabsan wax kasta oo alaab ah oo ay ka soo iibsadaan meheradeena. Dalalka qaarkood waa kuwo adag, waxayna u baahan yihiin ruqsad ama dhakhtarka takhtarku ka hor inta aan la soo dhoofin ama iibin steroids qaarkood. Soo koobid, waxaan nahay iibsashada iibka Alaab-qeybiyeyaasha Dihydroboldenone aduunka oo dhan, iyo dhammaan alaabooyinkayaga ayaa la xaqiijiyay oo idil ay samaysay dhammaan hay'adaha caalamiga ah. Si wanaagsan u hubso inaad tagto baaritaanka caafimaadka ka hor intaadan bilaabin isticmaalka alaabtayada si aan uga hortagno dhibaatooyinka lidka ku ah
12. Dihydroboldenone / DHB (1-Testosterone) loogu talagalay jirka dhismaha
DHB waxay ahayd wax soo saarka muhiimka ah ee warshadaha dhismaha jirka waxayna caddeeyeen shaki la'aan in ay gaarsiin karto natiijooyinka ay u ballanqaaday. Tusaale ahaan, ku dhawaad ​​dhammaan cayaaraha isticmaala DHB waxay soo bandhigeen natiijooyin wanaagsan. Daroogadu waxay kobcisaa kobaca muruqyada iyo sidoo kale hagaajinta jirka oo waxay ugu dambeyn kor u qaadaa waxqabadka. Dihydroboldenone ayaa lagu amaanay doorka ay ku leedahay duubista iyo jarista wareegyada. Markaad isticmaasho daroogada, ma haysatid sabab aadan ka walwalaynin xifdinta biyaha iyo karootiga maadaama aysan ku dhalan wax dhibaato ah. Dhibaatooyinka kale ayaa ka yar marka la barbardhigo steroids kale, sidaa daraadeed, waad fiicantahay inaad tagto markaad amarkaaga maanta samayso.
La-wareegista wareeggaaga oo leh cunto wanaagsan iyo shaqo-qabasho waxay noqon doontaa fikrad ugu wanaagsan ee lagu gaarayo natiijooyinka tayada. Daroogadu ma saameynayso rabitaankaaga cuntada, macneheedu waa inta lagu jiro mudada ciriiriga ah waxaad yeelan kartaa cuntada saxda ah iyada oo aan wax dhibaato ah. Qaadashada qiyaasta saxda ah ayaa sidoo kale ah arrin kale oo muhiim ah inaad diirada saarto, intaad wareegsanayso. Tababarahaaga iyo takhtarkaaga ayaa ah dadka ugu fiican ee ku hagaya inta lagu jiro safarkaaga jirka. DHB waxay leedahay hanti gaar ah oo ku siinaya muruqyo xooggan oo adag oo adag oo jidhkoodu uu rabo. Goob-caga-jarista, isugeynta steroid-ta kale ee dheeraadka ah waxay kaa caawineysaa in la shiido dufanka jirka aan la rabin. Dihydroboldenone si fiican ayuu u shaqeeyaa taageerooyinka kale ee taageerada, nolosha nuskuna waxay ku xiran tahay aaladda ku xiran.
Ma jirto sabab loo shaki qabo awoodda DHB maadaama ay ahayd wax cajiib ah dhammaan dadka isticmaala kuwa ku kalsoon. Inkasta oo natiijooyinka aysan aheyn mid deg deg ah, dhamaadka wareegga waxaad ku raaxeysaneysaa muruqyada tayada leh waxayna kugu adkaan doontaa inaad ku qaadato dhamaan tababarka tababarka iyo weliba si wax ku ool ah. Haddii aad ka qayb qaadatid tartan aan u oggolaaneynin isticmaalka steroids, wax walwal ah ma lahan, maadaama ay xubnuhu ka baaba'een jirkaada ka dib toddobaadyada XNUM markaad dhamaysid wareegga. Sidaa darteed, qorshso waqti wanaagsan oo aad u aragto xirfad aad korto si aad u sarreeya.
Kazlauskas, R. (2010). Isticmaalayaasha steroid. In Doping ee Isboortiga: Mabaadiida Biochemical, Saameynta iyo Falanqaynta(pp. 155-185). Duufaan, Berlin, Heidelberg.
Anti-bararka, PI (2011). Caabuqa koritaanka muruqa. caabuq, 5.
Magdziak, K., Cismaan, N., Tvaroha, A., Ding, J., & Fagan, JM (2011). Pro-hormoonnada iyo Body Image: Intee Ayuu Leeyahay?
10 ugu caansan Anabolic Steroids budada Raw ee 2019
Tilmaame-barka Ugu Dambeyn ee Is-bedelka si loo daweeyo dhalmo la'aanta dheddigga